संविधान संशोधन नहुँदासम्म पर्खनुपर्छ र आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ : अध्यक्ष उपेन्द्र यादव | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
मधेसकेन्द्रित छ दलहरुबीच एकता भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन भएको छ, तर त्यसमा छैनन्– संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । उनको पार्टीको एकता प्रयास भने नयाँ शक्तिसित भइरहेको छ । एक वर्षयता जारी यो प्रयत्नले राजपाको गठनपछि तीव्रता पनि पाएको छ । बिहीबारै यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई सम्मिलित एकता तयारी समिति गठन गरिएको छ । यही मेसोमा संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावबारे मधेसकेन्द्रित दलहरु र सत्ता पक्षबीच भइरहेको वार्ता पनि सकरात्मक दिशातर्फ मोडिएको छ । तर यादव भने ‘निर्णायक वार्ता’ छल्दै शनिबार बिहानै जनकपुरतर्फ लागेका छन् । उनको अबको राजनीतिक मार्गचित्र के हो ? कान्तिपुरका बसन्त बस्नेतले शनिबार गरेको कुराकानी :
सरकारसित दुई वर्षयता तपाईंंहरूको वार्ता चलेको चल्यै छ, किन अझै टुंगो नलागेको ?
तपाईंले दुई वर्षअघिको सम्झना गराउनुभयो । त्यस बेला प्रचण्ड हामीसहित ३० दलीय गठबन्धनको संयोजकका रूपमा अगुवाइ गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वमा संघीयता, पहिचान, समावेशिताका मुद्दा, मधेसी जनजाति, आदिवासीका सवाल उठिरहेका थिए । उहाँ ती मुद्दा चटक्कै छाडेर कांग्रेस–एमालेसँग १६ बुँदे सम्झौता गर्न जानुभयो । र, यो संविधान जारी गर्नुभयो । यो संविधान वास्तवमा उहाँको नीति, सिद्धान्त र मुद्दाविपरीत बन्दै थियो । आफैंले हाँकेको जनयुद्धका नाममा हजारौं मानिसको सहादत भयो । लाखौं अपांग र बेपत्ता भए । त्यो सबै भुलेर उहाँ सत्ता राजनीतिमा दौडिनुभयो । समावेशी लोकतन्त्र, पहिचान, गणतन्त्र, मधेसी, जनजाति, दलित, खस, थारू, मुस्लिमका मुद्दा उहाँले छाडेपनि हामीले छाड्न मिल्दैनथ्यो । हाम्रो विडम्बना नै भनौं, जोसँग मिलेर यी मुद्दा उठाइयो, आज उसैका हातमा सत्ता छ । अनि उही हामीलाई गोली हानिरहेको छ । सत्ताको खेल विचित्रको हुँदो रहेछ । सत्ताको पछि दौडँदा आफ्नै मुद्दा बिर्सने प्रवृत्तिका कारण आन्दोलनका विषय अहिलेसम्म टुंगो नलागेका हुन् ।
मधेसी मोर्चा र सत्तापक्षबीच हुन लागेको भनिएको सहमतिलाई चाहिं कसरी बुझ्नुभएको छ ?
मुख्य सवाल संघीयताको हो । संघीयतामा स्थानीय तह प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । शक्तिको वितरण र बाँडफाँड त्यसैअनुसार हुन्छ । प्रदेशहरू स्वायत्त हुन्छन् । जर्मनी, क्यानडा, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया आदि देशमा प्रदेश स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न छन् । अनि प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुन्छन् । कांग्रेस, एमाले यो संघीय प्रणाली समाप्त पार्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरू स्थानीय तहको चुनाव गर्न चाहन्छन् । यो संघीयता समाप्त पार्ने खेल हो । अहिले मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धनमा रहेका पार्टी जो वार्तामा छन्, उनीहरू यो संघीय प्रणाली जोगाउने गरी जान्छन् कि यसलाई टेकेर आफ्नो अडान राख्छन्, यो अग्निपरीक्षाको विषय हो । एउटा चुनाव लड्न पाउने अवसरलाई मात्रै ध्यान दिने र राजनीतिक मुद्दा परित्याग गर्ने हो कि, मुद्दाका लागि लड्ने भन्ने आशंका अहिले जनतामा छ ।
तपाईं मधेसी मोर्चाको एउटा मुख्य नेता भए पनि निर्णायक वार्ता हुने बेला जहिल्यै काठमाडौंबाहिर जानुहुन्छ । अनि काठमाडौंमा रहेका अरू मोर्चा नेताको वार्ता गर्ने क्षमतामाथि शंका गर्न मिल्छ ?
शंका गरेको होइन । उहाँहरू राजनीतिक दाउपेच र खेलमा पर्नु हुने हो कि भन्ने डर हो ।
– नेपालको राजनीति नाटक मञ्चन हुने ‘स्टेज’ जस्तो हुन पुगेको छ ।
– तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’को भय पनि उहाँहरूमा देखिन्छ ।
– पहिले केन्द्र, दोस्रोमा प्रदेश र तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ ।
– अब विगतका अनुभवबाट सिकेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि नराख्ने ?
– नयाँ शक्तिसँग कुरा प्रारम्भ भएको छ, टुंगो लगाउन सकेका छैनौं ।
– नेपाल तरुल होइन, दुई ढुंगाबीचको शक्तिकेन्द्र पनि बन्न सक्छ ।
उसो भए सहमतिका आधार केके हुन् ?
पहिले संघीय संसद्को चुनाव हुनुपर्छ । नत्र संसद् र प्रदेशको सँगै गरे पनि भयो । त्यसपछि प्रदेश सरकार बन्छ । त्यसका माध्यमबाट पूर्ण स्थानीय निकाय बनाउने बाटो सुल्टा हो । अहिले विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रहरू केही पनि छैनन् । यो संरचना बनाउने जिम्मा प्रादेशिक विधायिकालाई दिनुपर्छ । यो संघीय मर्म हो । अब साथीहरू यो मर्ममा अडिनुहुन्छ कि सम्झौता गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा हो ।
संघीयताको मूल मर्म त केन्द्रमा सञ्चित शक्ति जनतासम्म विस्तार गर्नु होइन र ? त्यो त स्थानीय तहको नयाँ संरचनाले सुनिश्चित गरेको देखिन्छ नि ?
संघीय प्रणाली भनेको जनताले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा राख्ने, अनि जनताले दिएको शक्तिलाई केन्द्रले प्रयोग गर्ने प्रणाली हो । यहाँ त के भयो भने केन्द्रले प्रदेशलाई कति दिने, अनि जनतालाई कति दिने भन्ने खालको आयो ।
स्थानीय तह शक्तिशाली हुनु भनेको आफैंमा जनता शक्तिशाली हुनु होइन ?
मूल कुरा के हो भने मधेस आन्दोलनमा राज्यसँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मधेसमा स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ । त्यो प्रणालीले केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँट हुन्छ । अहिले यसो हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्नेछ त भनिएको छ, तर त्यो संघीय कानुनसँग बाझिनु भएन, बाझिएमा खारेज हुने पनि भनिएको छ । यसको अर्थ फेरि पनि प्रदेश विधायिकाले बनाएका कानुनको अर्थ रहेन । अहिले केन्द्रकै क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय निकाय राखेपछि यो एकात्मक प्रणालीभित्रैको विकेन्द्रीकरणजस्तो भयो । त्यसैले संघीय प्रणालीको मर्म स्विकार्ने कि नस्विकार्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । अहिले संघीय प्रणाली धरापमा परेको छ । त्यसमाथि स्थानीय चुनाव केन्द्र सरकारले गराएर प्रदेशको भूमिका खुम्च्याएको छ ।
जुनसुकै प्रणालीमा गए पनि चुनाव गराउने काम त निर्वाचन आयोगकै हो नि, होइन ?
होइन, आयोग ‘एजेन्सी’ मात्रै हो । चुनावको राजनीतिक निर्णय गर्ने ‘अथोरिटी’ त अहिले केन्द्र नै छ । हामीले यस्तै कुरामा संशोधन मागेका हौं । त्यसैले मोर्चा र गठबन्धनले निर्णय नै गरेको छ– संविधान संशोधन गर्दा प्रादेशिक सीमांकन मिलाउँदै मधेस, आदिवासी जनजातिलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ, संविधानमा भएका कमजोरी सच्याउनुपर्छ । अनि त्यसपछि पहिले केन्द्र, दोस्रोमा प्रदेश र तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ । यसैका लागि हामीले आजसम्म उठाउँदै आएको राज्य पुन:संरचनाको मुद्दा पहिले हल गर्न सरकारलाई भनिरहेका छौं । त्यो भएपछि जाने त चुनावमै हो ।
स्थानीय तहको अधिकार काट्नलाई किन प्रदेशकै मातहत ल्याउनुपर्‍यो ? कतिपय संघीय देशमा त सिधै केन्द्र मातहत पनि देखिन्छन् नि ?
स्थानीय तह शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मतै भएन । तर संघीय प्रणालीमा जाने भएपछि प्रदेशकै मातहत हुनुपर्छ । नत्र किन संघीयता ?
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार पनि काट्ने कुरा गर्नुभयो ?
राष्ट्रिय सभा भनेको के हो ? दुई सदनात्मक देशमा राष्ट्रिय सभा ‘हाउस अफ् प्रोभिन्स’ हो । जर्मनी, ब्राजिल, भारत, क्यानडातिरको उदाहरण हेरौं त । भारतमा राज्यसभा प्रदेशहरूका विधायकबाट चुनिएर बन्ने सभा हो । इथियोपियामा हाउस अफ् नेसनालिटी छ । विभिन्न नेसनालिटिजको हाउस हुन्छ । कि त त्यसमा जानुपर्छ । नत्र स्थानीय तह प्रदेशकै मातहत चाहिन्छ । अनि प्रदेशले नै माथ्लो सदन चुन्ने अधिकार प्रयोग गर्ने हो ।
नेपालले यसबारे आफ्नै मोडल बनाउन सक्दैन ? किन अरूको नक्कल गर्ने ?
सक्छ, नसक्ने होइन । तर अहिलेको मोडल षड्यन्त्रमूलक ढंगले आयो । मधेसमा ७४४ मध्ये २६५ तह मात्रै दिइएको छ । यसको अर्थ मधेसलाई हमेसा ‘लुजर’ बनाउने हो । पहाडका जनजाति पार्टी अनि क्षेत्रीय पार्टीलाई लुजर बनाउने गरी ल्याइयो । त्यसैले विरोध गर्नुपरेको हो । अर्को त सिद्धान्तकै कुरा हो । प्रदेशको अधिकार प्रदेशले नै प्रयोग गर्ने हो, केन्द्रले होइन ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावको नतिजा आएदेखि तपाईं किन निरन्तर असन्तुष्ट बन्नुभएको ?
यो असन्तुष्टिको कुरा होइन, सिद्धान्तको कुरा हो । यो देशको आवश्यकताको कुरा हो । वार्ता सफल होस्, मेरो कामना छ । तर मूलभूत मुद्दा छाड्न पाइँदैन ।
निर्णायक वार्ताको तयारी हुँदै गर्दा तपार्इं किन सधैं काठमाडौं बाहिर ?
होइन, म पहिल्यै घोषित कार्यक्रममा लागि जनकपुर जाँदै छु । मोर्चा र गठबन्धनले मलाई दिएको ड्युटी पूरा गर्न खटिएको छु ।
यो साता राजनीतिक गतिविधि त निकै फटाफट अघि बढ्यो नि ? कसरी बुझ्नुभएको छ ?
हेर्नुस्, नेपालको राजनीति नाटक मञ्चन हुने ‘स्टेज’ जस्तो हुन पुगेको छ । कोतपर्व, भण्डारखाल, दरबार हत्याकाण्डजस्ता नाटक अझै भइरहेका छन् । अन्तरिम संविधानको प्रावधानविपरीत मध्यराति ४–५ जना बसेर संविधान संशोधन गर्ने, राष्ट्रपतिलाई १ बजे प्रमाणीकरण गर्न लगाउने अनि भोलिपल्ट बिहान ८ बजे एउटा कर्मचारीलाई शपथग्रहण गराउनेजस्ता नाटक यो देशमा हुन्छन् । यस्तो नाटक अझै भइरहने देखिन्छ । तर नाटकले देश र जनताको समस्या हल हुँदैन । नाटकबाट गरिबी, विभेद र विपन्नता उन्मूलन हँ‘दैन । अफगानिस्तान, कंगो, कम्बोडिया, लाइबेरियाजस्ता मुलुकमा नाटकीय घटना धेरै भइसक्यो, तर ती देश बनेनन् । जति नाटक बढ्दै जान्छन्, मुलुक बिग्रँदै जान्छ । अनि जनताले दु:ख पाउँदै जान्छन् ।
छ मधेसी दलहरूको एकताबारे तपाईंंको टिप्पणी के छ ?
जुन साथीहरू एक ठाउँमा आउनुभयो, म त्यसलाई अत्यन्त सकारात्मक मान्छु । हामी उहाँहरूसँगै सहकार्य गर्दै फेरि पनि अघि बढ्ने हो । तर फेरि पनि भन्छु, राष्ट्रिय राजनीतिका समस्याहरू नाटकीय ढंगले हल गर्न सकिँदैन ।
तपाईंंले जेलाई नाटक भन्दै हुनुहुन्छ, यसलाई नेपथ्यबाट निर्देशन गर्ने अरू कोही छ ?
यसका लागि अलिकति इतिहासतिर जानुपर्ने हुन्छ । एउटा समय थियो, जुन बेला यो देशमा बीपी कोइरालाजति शक्तिशाली कोही थिएन । तर एउटा कुरा याद गर्नुभएको छ– जब उनी सर्वाधिक शक्तिशाली हुन खोज्थे, त्यही बेला सबैभन्दा कमजोर पारिन्थे । यो देशमा जजसले राष्ट्रिय स्वार्थ र हित समात्न खोजे, ती–ती नेता र संगठनले दु:ख मात्रै भोगेका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको पनि त्यही हालत भयो । हामी पनि त्यही नाटकको चक्रव्यूहमा परेका हौं । त्यसैले अब विगतका अनुभवबाट सिकेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि नराख्ने ? म त भन्छु, राख्नुपर्छ ।
तपाईंले बाबुराम भट्टराइको नयाँ शक्तिसित गर्ने भनिएको एकता प्रयास पनि त्यही नाटककै अर्को भाग भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् नि ?
पहिलो कुरा त एकता हुने भए त पहिल्यै भइसक्थ्यो । हामीले नै गर्न सकेका छैनौं । कुरा प्रारम्भ भएको छ, टुंगो लगाउन सकेका छैनौं ।
के कारणले टुंगो लगाउन नसक्नुभएको ?
हेर्नुस्, दुई पार्टी मिलाउँदा धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने हुँदो रहेछ । सैद्धान्तिक उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम मिलाउन समय लाग्दो रहेछ । एकीकरण भन्ने कुरा सैद्धान्तिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हामी आदर्शको कुरा गर्छौं, त्यसको जग हुनुपर्छ । एकता अवसरवादी ढंगले गरेर हुँदैन, भए पनि टिक्दैन । बरु राजनीतिमा अनुहार नमिले पनि हुन्छ, तर नीति उद्देश्य र सिद्धान्तचाहिं मिल्नुपर्छ । अवसरवादी एकताहरू दिगो हँ‘दैनन् । बालुवाको घरजस्तै हुन् ती । अरबका रेगिस्तानमा हावा चल्दा खाल्डो र ढिस्को बन्छ, अर्को हावा आयो भने त्यो ढिस्को उडेर कहाँ जान्छ, कहाँ । पार्टी मिलाउनु भनेको त इँटा मिलाएर घर बनाउनुजस्तै हो । तर एउटा इँटा र अर्को इँटाबीच सिमेन्ट हुन्छ । त्यो सिमेन्ट भनेको सिद्धान्त र विचारधारा हो । विचारको सिमेन्टबिनाको त्यस्तो इँटा रेगिस्तानको बालुवाले उडाएर लैजान्छ ।
जे भए पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित दल एकीकृत हुँदै जानु राम्रो होइन ?
राम्रो । तर तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ को भय पनि उहाँहरूमा देखिन्छ । चुनावमा आइपर्ने भविष्यको आशंका एउटा पक्ष छँदै छ । र, अहिलेका लागि एकताको महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो । जे भए पनि फुट्नुभन्दा मिल्नुचाहिं राम्रै हो ।
उहाँहरूले तपार्इंसँग पनि एकताको आग्रह गर्नुभएको रहेछ नि त ?
ए, हो र ? खै, हामीसँग त कुनै सम्पर्क गर्नुभएन । हामीले त एकैचोटि अस्ति फेसबुकबाट थाहा पायौं, अमृतभोग पार्टी प्यालेसमा एकता घोषणा हुँदै छ भनेर । त्यसैले कुनै सम्पर्क र सल्लाह भएको होइन ।
नयाँ शक्तिसँग एकता गर्न अब कति समय लाग्छ ?
सबै कुरा टुंग्याउन समय लाग्छ । हामी हतारमा छैनौं । कुराकानी लक्ष्यभेदी हुनुपर्छ । यसमा कुरा मिलेपछि सबै भइहाल्छ ।
बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्ष मान्न तयार हुनुभएको हो ?
यो प्रचार मात्रै हो । यसबारे कुरा हुन बाँकी छ, टुंगेको भए त घोषणा भइहाल्थ्यो ।
दलको मधेसी पहिचान विस्तार गर्दै पहाडका जनजाति र खस पार्टीसँग तपार्इंले एकता गरेको २ वर्ष पुग्न लाग्यो । कस्ता रहे यी दुई वर्ष ?
अत्यन्त गौरवमय । नेतृत्वबीचको एकता, मित्रता र सदभाव हाम्रो पार्टीमा जुन स्तरमा उठेको देखियो, त्यति अरू कुनै पार्टीमा छैन । हामीले एउटा राम्रो पार्टी बनाएर देखायौं । यो मधेस, हिमाल, पहाडका शोषित उत्पीडित जनताको एकताको सिम्बोल भएको छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको मियो बन्ने काम भएको छ । हुन त हाम्रो एकताबाट धेरैलाई चोट पनि लागेको होला ।
तपाईंले अरू मधेसी नेतालाई संकेत गर्नुभएको हो ? उहाँहरूले त नयाँ दलमा उपेन्द्र नआए सकिन्छन् पनि भन्नुभएको छ नि ?
उहाँहरूले एकता अरूलाई समस्यामा पार्न गरेको हो कि क्या हो ? यहींबाट उहाँहरूको एकता पवित्र छैन भन्ने देखिन्छ । म त उहाँहरूलाई सकारात्मक रूपमै लिइरहेको छु । यदि उहाँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ भने (उहाँहरू) मधेसको पनि हितैषी होइन, देशको पनि होइन । त्यस्तो हो भने उहाँहरूले त अरूकै लक्ष्यका लागि काम गरेको ठहर्छ ।
मधेसी दलको एकतामा भारतीय भूमिका देखाउन खोज्नुभएको हो ?
हेर्नुस्, नेपालको राजनीति आजसम्म कहिल्यै पनि भूराजनीतिबाट अछुतो छैन । पृथ्वीनारायण, जंगबहादुरदेखि आजसम्म नेपालको राजनीति भूराजनीतिबाट प्रभावित नहुने अवस्था कहिल्यै आएको छैन । त्यसै भएर होला, पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुंगाको तरुल भनेको ।
तरुल बनाइराख्ने निरन्तरतामा राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि आइपुग्यो भन्नुभएको ?
तरुल चेपिँदै जान्छ । तरुलको अवस्थाबाट हामी अर्को अवस्थामा पुग्नुपर्छ । त्यसको आधार राष्ट्रिय एकता, शान्ति, समृद्धि नै हो । त्यसका लागि जातीय–क्षेत्रीय आधारमा देखिँदै आएका असमानता र विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ । यति गर्न सकियो भने नेपाल तरुल होइन, दुई ढुंगाबीचको शक्तिकेन्द्र पनि बन्न सक्छ ।
तपार्इं पहिले मधेस–मधेस भन्नुहुन्थ्यो, अब समग्र नेपालको कुरा गर्न थाल्नुभयो ?
मधेसको समस्या अहिले पनि समाधान भएको छैन । यसलाई हल गर्नैपर्छ । त्यसका लागि अझै लडिन्छ । तर यो मधेसको समस्या जसरी राष्ट्रिय समस्या हो, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, मुस्लिमको समस्या पनि राष्ट्रिय समस्या नै हो । अब एउटा क्षेत्रको मात्रै समस्या हल गर्छु भन्दा सकिन्न ।
मोर्चाका सात दल घटेर दुईमा झरेपछि अब मधेसी मोर्चा आवश्यक पर्ला ?
दुई पार्टी मात्रै होइन, मधेसमा केन्द्रित अझै अरू दल पनि अलग छन् । मोर्चालाई अझै बृहत् बनाउन आवश्यक छ । मोर्चाभन्दा अलग रहेका, कुनै कालखण्डमा योगदान गरेका साथीहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ ।
अब सहमति भए चुनावमा जानुहुन्छ ?
चुनाव होइन, मोर्चाले उठाएका कुरामा सहमति, त्यसअनुसार संविधान संशोधन नै गरेर देखाउनुपर्छ । मोर्चाको मागअनुसार संशोधन नहुँदासम्म हामीले पर्खनुपर्छ । आन्दोलन निरन्तर जारी राख्नुपर्छ । यदि लागू भएन भने यस्ता सहमतिको के अर्थ हुन्छ ? मोर्चा र गठबन्धनका मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेल यो सहमति पनि विगतमा झैं अर्को कागजको खोस्टा हुन्छ । यदि सम्झौता कागजमा भयो, संशोधन भएन भने राज्यले मोर्चा गठबन्धनलाई धोका दिएको ठहर्नेछ । संविधान संशोधन नभई गठबन्धन र मोर्चाले आफ्नो बाटो बिराए भने त्यो देश र जनताप्रति धोका हुनेछ ।
प्रकाशित: वैशाख १०, २०७४ ।
सरकारले देशलाई विखण्डनतर्फ धकेल्ने प्रयास गर्दैछ : उपेन्द्र यादव
अहिलेका कांग्रेस, कम्युनिस्टकै कारण देशमा अस्थिरता छ : अध्यक्ष यादव
Posted by admin on Apr 23 2017. Filed under Breaking News, अन्तरवार्ता, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry